Dala imephu exhumanayo yokuphakama kwezinga lolwandle | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Dala imephu exhumanayo yokunyuka kwezinga lolwandle
Isithombe - Intuthuko Yesayensi
Impela uzwile noma ufunde kaningana ukuthi ngonyaka ka-2100 izinga lolwandle lingakhuphuka lisuke kumamitha amathathu kuye kwayi-3, futhi nangaphezulu, kepha uyazi ukuthi lo mkhukula ungazithinta kanjani izingxenye ezahlukahlukene zomhlaba? Kuze kube manje, impela, umuntu angaqagela kuphela; nokho, kuze kube namuhla singasebenzisa ibalazwe elisebenzisanayo ukuze sibe nombono ocacile futhi ocacile ukuthi umhlaba uzobukeka kanjani eminyakeni embalwa.
Futhi hhayi lokho kuphela, kodwa Sizokwazi nokwazi ukuthi iqhwa elithinta ugu lwamadolobha abaluleke kakhulu lalikuphi wezwe.
Ososayensi be-NASA's Jet Propulsion Laboratory benze i ithuluzi lokubikezela elibikezela ukuthi ukuncibilika kwezinguzunga zeqhwa eGreenland nase-Antarctica kuzothinta kanjani inani lamadolobha echweba angama-293 emhlabeni jikelele. Ukwenza lokhu, basebenzise indlela yabo "ye-gradient footprint mapping" noma i-GFM kusichazamazwi sayo esiNgisini, ngaleyo ndlela bathola imikhondo yeziqu yendawo ngayinye. Ukushintshwa kombala kukhombisa ukwanda kolwandle okungabikezelwa endaweni ethile yaseGreenland nase-Antarctica.
Kuyinto a ncibilika imephu Kuyathakazelisa kakhulu, ngoba kwenziwa kucatshangelwa ukuphazamiseka kwamandla adonsela phansi kanye nomjikelezo woMhlaba, kanye nomphumela izindawo zezinhlelo zamapayipi okuhambisa amanzi ezinalo edolobheni ngalinye. Ngakho-ke, singasho ukuthi ithembeke kakhulu.
Ngokwmephu, siyabona ukuthi ukuncibilika kwe-Antarctica kuzothinta i- Amadolobha aseLatin America; izinguzunga zeqhwa entshonalanga yeGreenland zizokhuphula amazinga olwandle ngo Barcelona y Gibraltar; izingxenye ezisenyakatho nasempumalanga yeGreenland zizothinta ENew York kanti ukuncibilika kwenyakatho-ntshonalanga yeGreenland kuzokhuphula amazinga olwandle ngo London, phakathi kwabanye.
Ukuthola okuningi, yenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Dala imephu exhumanayo yokunyuka kwezinga lolwandle
IBonn Climate Summit 2017 iyaphela (COP23)